ရုတ်တရက် မောင်းနေရင်း ကားဘရိတ်ပေါက်သွားရင် အရေးပေါ်သင်လုပ်ရမည့် အချက်လေးများ – Amara News
ရုတ်တရက် မောင်းနေရင်း ကားဘရိတ်ပေါက်သွားရင် အရေးပေါ်သင်လုပ်ရမည့် အချက်လေးများ
အရေးပေါ် ကားဘရိတ်ပေါက်သွားရင် ဘာလုပ်သင့်လဲ.?
ကားစတီယာရင် ကို ကိုင်နေတဲ့ လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေ ဖြစ်လို့ ပြန်လည်မျှ​ဝေပေးချင်ပါတယ်။
အခြေခံအားဖြင့်တော့ ကား မှာ ပုံမှန် ဘီးလေးဘီး စလုံးအလုပ်လုပ်တဲ့
a- Hydraulic Brake – ဘရိတ်ဆီ Fluid Pressure နဲ့ ကားဘီးလေးဘီးကို ထိန်းချူပ်ပါတယ်
b- Electromagnetic Brake – Electric Motor နဲ့ ကားကို ထိန်းချူပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Fuel + Battery Hybrid Car တွေမှာပါပါတယ်
c- Servo Brake – Vacuum Pressure နဲ့ ကားဘီးလေးဘီးကို ထိန်းချူပ်ပါတယ်။
အစရှိတဲ့ ဘရိတ် စနစ် တွေထဲက တစ်ခုခု ပါပါတယ်။ တကယ်လို့များ တခုခုချွတ်ယွင်းသွားလို့ ဘရိတ်ပေါက်သွားခဲ့ရင် အခုပြောပြပေးမဲ့ SOP အရေးပေါ်လုပ်ဆောင်ချက် တွေကို မှတ်ထားပါ။
1/ယဉ်ရှင်းသော လမ်းကြောကို ပြောင်းယူပါ။အချက်ပြ စုံမီး ပြပါ။ဟွန်း မီး တောက်ပြီး မိမိကား စက်ချွတ်ယွင်း နေကြောင်း လမ်းကြောတူ အရှေ့ ကားများကို သတိပေးပါ။
တချိန်ထဲမှာပဲ Brake Pedal ကို ခြေဖြင့် လေးငါးကြိမ် နင်းစမ်းပြီး Power တပ်အောင် လုပ်ကြည့်ပါ။
2/(Manual Transmission) ကားများအတွက်
လက်ရှိ သွားနေတဲ့ ဂီယာ ကနေ နံပါတ်အမြင့်ဆုံးကို တဆင့်ချင်းချိန်းချပါ။ ဥပမာ သင့်ကားက ဂီယာ နံပါတ် ၄ မှာဆို နံပါတ် ၁ အထိကို တဆင့်ချင်းချိန်းချ ခြင်းဖြင့် ကားဂီယာဘောက်စ် မှတစ်ဆင့် ကားရဲ့ အရှိန်ကို ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး မြန်မြန် အရှိန်လျော့သွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(Automatic Transmission) ကားများအတွက်
အော်တိုဂီယာကားတွေဆိုရင်တော့ ဂီယာ D ကနေ 2.. ထိုမှ L အထိ မန်ယူရယ် ဂီယာတွေ အတိုင်း ပြောင်းထိုးပြီး ကားအရှိန်ကို လျော့သွားအောင်လုပ်ပါ။
ဒီလို ဂီယာပြောင်းပြီး ကားအရှိန်လျော့ သွားအောင်လုပ်ခြင်းကို Engine Braking လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။
Free Gear/ N Neutral Gear ကို လုံးဝ မထိုးမိဖို့ အထူး သတိပြုပါ။
Free Gear ထိုးလိုက်ခြင်းဖြင့် အင်ဂျင် နဲ့ ဂီယာဘောက်စ် ကို Disconnect အဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကားလက်ရှိသွားနေသော ကိန်းသေအလျင် ကို ထိန်းထားနိုင်စွမ်း လုံးဝ မရှိတော့ပါဘူး။
3/နောက်ထပ်လုပ်ရမှာကတော့ ကားရဲ့ အဲကွန်း..မီး..heater အစရှိတဲ့ accessories အားလုံးကို သုံးပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကားရဲ့ အရှိန်နဲ့ ပါဝါကို Alternator ကနေတဆင့် ရုတ်လျော့သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
(Alternator ဆိုတာကတော့ မြန်မာလို မော်တာ လို့ သိကြတဲ့ Battery ကို ကားမောင်းနေစဉ် Charging ပေးပြီး ကားလည်ပတ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ Electric Power ကို Electrical System ကို လျှပ်စစ်ဓါတ် ပို့လွှတ်ပေးနေတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။)
4/နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Emergency Brake/ Hand Brake ကို တဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲတင်ပြီး ကားအရှိန်ကို ထိုးကျသွားအောင်လျော့ပါ။
အထူးရှောင်ကြဉ်ရန် အရေးပေါ်ဘရိတ် Hand brake သည် ကားရဲ့ နောက်ဘီး နှစ်လုံးကိုသာ ထိန်းကြောင်းပေးသော စနစ်ဖြစ်တာကြောင့် သီအိုရီအရ 20km/hr နှုန်းမှသာ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ High Speed နဲ့ သွားနေတဲ့ အချိန် အသုံးပြုလိုက်ရင် ကားဟာ ချာလည်ပတ်လည် သွားမှာပါ။
5/ရွေးချယ်စရာ မရှိတော့တဲ့ အချိန်မျိူးရောက်သွားခဲ့ရင်တော့ အဆုံးအရှုံးနဲနိုင်မဲ့ နည်းကိုပဲရွေးရတော့မှာပါ။ အကာအရံတစ်ခုကို ကားရဲ့ဘေးပါးခြမ်းနဲ့ ပွတ်ဆွဲပြီး ကားရဲ့ အရှိန်ကို
ဒါကတော့ ဘယ်သူမှ မလိုချင် မလုပ်ချင်တဲ့ ရွေးချယ်မှုပါ။ ဒါပေမဲ့လဲ လိုအပ်ရင်တော့ တခုခု ဆုံးဖြတ်ရမှာပဲလေ။
Programs For Machine
အရေးပျေါ ကားဘရိတျပေါကျသှားရငျ ဘာလုပျသငျ့လဲ.?
ကားစတီယာရငျ ကို ကိုငျနတေဲ့ လူတိုငျးသိထားသငျ့တဲ့ အခကျြလေးတှေ ဖွဈလို့ ပွနျလညျမြှ​ဝပေေးခငျြပါတယျ။
အခွခေံအားဖွငျ့တော့ ကား မှာ ပုံမှနျ ဘီးလေးဘီး စလုံးအလုပျလုပျတဲ့
a- Hydraulic Brake – ဘရိတျဆီ Fluid Pressure နဲ့ ကားဘီးလေးဘီးကို ထိနျးခြူပျပါတယျ
b- Electromagnetic Brake – Electric Motor နဲ့ ကားကို ထိနျးခြူပျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ Fuel + Battery Hybrid Car တှမှောပါပါတယျ
c- Servo Brake – Vacuum Pressure နဲ့ ကားဘီးလေးဘီးကို ထိနျးခြူပျပါတယျ။
အစရှိတဲ့ ဘရိတျ စနဈ တှထေဲက တဈခုခု ပါပါတယျ။ တကယျလို့မြား တခုခုခြှတျယှငျးသှားလို့ ဘရိတျပေါကျသှားခဲ့ရငျ အခုပွောပွပေးမဲ့ SOP အရေးပျေါလုပျဆောငျခကျြ တှကေို မှတျထားပါ။
1/ယဉျရှငျးသော လမျးကွောကို ပွောငျးယူပါ။အခကျြပွ စုံမီး ပွပါ။ဟှနျး မီး တောကျပွီး မိမိကား စကျခြှတျယှငျး နကွေောငျး လမျးကွောတူ အရှေ့ ကားမြားကို သတိပေးပါ။
တခြိနျထဲမှာပဲ Brake Pedal ကို ခွဖွေငျ့ လေးငါးကွိမျ နငျးစမျးပွီး Power တပျအောငျ လုပျကွညျ့ပါ။
2/(Manual Transmission) ကားမြားအတှကျ
လကျရှိ သှားနတေဲ့ ဂီယာ ကနေ နံပါတျအမွငျ့ဆုံးကို တဆငျ့ခငျြးခြိနျးခပြါ။ ဥပမာ သငျ့ကားက ဂီယာ နံပါတျ ၄ မှာဆို နံပါတျ ၁ အထိကို တဆငျ့ခငျြးခြိနျးခြ ခွငျးဖွငျ့ ကားဂီယာဘောကျဈ မှတဈဆငျ့ ကားရဲ့ အရှိနျကို ပုံမှနျထကျပိုပွီး မွနျမွနျ အရှိနျလြော့သှားစမှော ဖွဈပါတယျ။
(Automatic Transmission) ကားမြားအတှကျ
အျောတိုဂီယာကားတှဆေိုရငျတော့ ဂီယာ D ကနေ 2.. ထိုမှ L အထိ မနျယူရယျ ဂီယာတှေ အတိုငျး ပွောငျးထိုးပွီး ကားအရှိနျကို လြော့သှားအောငျလုပျပါ။
ဒီလို ဂီယာပွောငျးပွီး ကားအရှိနျလြော့ သှားအောငျလုပျခွငျးကို Engine Braking လုပျတယျလို့ချေါပါတယျ။
Free Gear/ N Neutral Gear ကို လုံးဝ မထိုးမိဖို့ အထူး သတိပွုပါ။
Free Gear ထိုးလိုကျခွငျးဖွငျ့ အငျဂငျြ နဲ့ ဂီယာဘောကျဈ ကို Disconnect အဆကျအသှယျဖွတျလိုကျခွငျးဖွဈပွီး ကားလကျရှိသှားနသေော ကိနျးသအေလငျြ ကို ထိနျးထားနိုငျစှမျး လုံးဝ မရှိတော့ပါဘူး။
3/နောကျထပျလုပျရမှာကတော့ ကားရဲ့ အဲကှနျး..မီး..heater အစရှိတဲ့ accessories အားလုံးကို သုံးပါ။ ဒီလိုလုပျခွငျးဖွငျ့ ကားရဲ့ အရှိနျနဲ့ ပါဝါကို Alternator ကနတေဆငျ့ ရုတျလြော့သှားစမှောဖွဈပါတယျ။
(Alternator ဆိုတာကတော့ မွနျမာလို မျောတာ လို့ သိကွတဲ့ Battery ကို ကားမောငျးနစေဉျ Charging ပေးပွီး ကားလညျပတျဖို့ လိုအပျတဲ့ Electric Power ကို Electrical System ကို လြှပျစဈဓါတျ ပို့လှတျပေးနတေဲ့ အရာဖွဈပါတယျ။)
4/နောကျဆုံးအနနေဲ့ Emergency Brake/ Hand Brake ကို တဖွညျးဖွညျးခငျြးဆှဲတငျပွီး ကားအရှိနျကို ထိုးကသြှားအောငျလြော့ပါ။
အထူးရှောငျကွဉျရနျ အရေးပျေါဘရိတျ Hand brake သညျ ကားရဲ့ နောကျဘီး နှဈလုံးကိုသာ ထိနျးကွောငျးပေးသော စနဈဖွဈတာကွောငျ့ သီအိုရီအရ 20km/hr နှုနျးမှသာ အသုံးပွုရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုမှမဟုတျဘဲ High Speed နဲ့ သှားနတေဲ့ အခြိနျ အသုံးပွုလိုကျရငျ ကားဟာ ခြာလညျပတျလညျ သှားမှာပါ။
5/ရှေးခယျြစရာ မရှိတော့တဲ့ အခြိနျမြိူးရောကျသှားခဲ့ရငျတော့ အဆုံးအရှုံးနဲနိုငျမဲ့ နညျးကိုပဲရှေးရတော့မှာပါ။ အကာအရံတဈခုကို ကားရဲ့ဘေးပါးခွမျးနဲ့ ပှတျဆှဲပွီး ကားရဲ့ အရှိနျကို လြော့လိုကျပါ။
ဒါကတော့ ဘယျသူမှ မလိုခငျြ မလုပျခငျြတဲ့ ရှေးခယျြမှုပါ။ ဒါပမေဲ့လဲ လိုအပျရငျတော့ တခုခု ဆုံးဖွတျရမှာပဲလေ။
Previous Article “ကျနော်တို့ ရွှေမြန်မာတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲ….ထန်းလျက်တောင် အတုချက်နေကြပြီတဲ့ဗျာ…
Next Article နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက သင့်ကို စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ့်အချက် (၅) ချက်